राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा एउटै पार्टीका दुई आकांक्षी, कसले मार्ला त बाजी !
Sat, Feb 22, 2020 at 10:16pm
राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा एमालेका परशुराम मेघी गुरुङ र गणेश तिमल्सेनाको रस्साकस्सी, गुरुङबारे शीर्ष नेताहरु 'कन्भीन्स'
आईतवार, २७ फागुन २०७४,	आहाखबर	1.17K
प्रधानमन्त्री र सभामुखको चयन भइसकेको छ । २९ फागुनमा हुन गइरहेको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भइसकेको छ । मतपरिणामअनुसार वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै राष्ट्रपतिमा दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ ।
राज्यको मुख्य निकाय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख चयन भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष को हुने ? भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । राज्यको प्रमुख चार निकायमध्ये तीन निकायको प्रमुख चयन भइसकेपछि राष्ट्रियसभामा को भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली, सभामुखमा कृष्णबहादुर महरा निर्वाचित भइसकेका छन् राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनेछिन्। मुख्य ३ निकायको प्रमुखको प्रमुख निर्वाचित भइसकेपछि बाँकी रहेको १ निकायमा समावेशी निकाय बनाउनका निम्ति पनि परशुरामलाई बनाउनुपर्ने कतिपयको धारणा छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको मनोनयन दर्ता सोमबारका लागि तोकिएको छ भने बुधबार निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ। राष्ट्रियसभामा फरक अनुहार नपठाए राज्यको अनुहार पूर्णत: असमावेशी बन्ने देखिन्छ। वाम गठबन्धनको सहमतिअनुसार राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष एमालेको भागमा परेको छ। जसका लागि एमालेका परशुराम मेघी गुरुङ र गणेशप्रसाद तिमिल्सेना दाबेदार देखिएका छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एमालेको भागमा परेपछि गुरुङ र तिमिल्सेना दाबेदार देखिएका छन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पनि प्रतिनिधिसभाका सभामुखको जस्तै भूमिका हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
को हुन् परशुराम मेघी गुरुङ ?
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा एमालेबाट दाबी गर्दै आएका परशुराम मेघी गुरुङ सबैभन्दा सिनियर नेता हुन्। एमाले पोलिटव्युरो सदस्य गुरुङ ०४८ सालको निर्वाचनमा संखुवासभाबाट १ बाट र ०५६ सालको निर्वाचनमा संखुवासभा २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए। २०५६ पछि एमाले संसदीय दलको सचेतक भएर काम गरेका गुरुङले त्यतिबेला सचेतकको भूमिका कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरेका थिए।
०५१ मा एमाले संखुवासभा जिल्ला अध्यक्ष भएका गुरुङ संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेनन्। उनले समानुपातिक तर्फसमेत अवसर पाएनन्। २०६४ देखि २०६९ सम्म नेकपा (एमाले) मुख्यालयमा कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका गुरुङ एमालेले संघीय मामिला विभाग स्थापना गरेयता, उनी यो विभागका प्रमुख हुन्।नेपालको संघीयता र स्थानीय तहको बारेमा गहिरो जानकारी राख्ने गुरुङ हालका सात प्रदेशको खाकाका प्रस्तावकसमेत हुन्। एमालेका अन्य नेताहरुले समेत १० देखी १४ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरीरहेको बेला बढीमा ८ प्रदेश हुने भन्दै उनले खाका प्रस्तुत गरेका थिए। पछि उनकै खाका अनुसार नेपालको ७ प्रदेश निर्माण गरिएको हो।
पहिलो संविधानसभा विघटनपछि तत्कालिन उपाध्यक्ष अशोक राईसहित आदिवासी जनजाति नेताहरुले एमाले पहिचान विरोध पार्टीको आरोप लगाएर बाहिरिएपछि गुरुङको विभागले देशभरि प्रशिक्षण चलाएको थियो। उनले पुन: संरचनाको वैज्ञानिक खाका प्रस्तुत गरेर एमाले जनजाति र पहिचानविरोधी होइन भन्ने तथ्यलाई कार्यकर्ताको विचमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनी हाल कार्यान्वयनमा रहको स्थानीय तहको परिकल्पनाकार र प्रस्तावकसमेत हुन्। हाल ७ सय ७३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा छ ।
उनले पहिलोपटक ९ सय २५ स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेका थिए। एमालेको यो प्रस्तावलाई नै मिलाएर ७ सय ७३ बनाइएको हो। संसदीय अभ्यासको पनि जानकार नेता गुरुङ एमालेभित्र इमानदार नेताका रुपमा परिचित छन्। एमाले निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिवसमेत रहेका गुरुङलाई राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष बनाउन दबाब बढेको छ। गुरुङबारे एमालेका शीर्ष नेताहरु 'कन्भीन्स' देखिन्छन् ।
को हुन् गणेश तिमल्सेना ?
एमाले नेता तिमल्सेना प्रदेश ४ बाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। पार्टीमा लामो समय काम गरेकाले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पाउनुपर्ने तिमल्सेनाको दाबी छ। उनी पहिलोपटक राष्ट्रिय सभामा सांसद भएका हुन् । तिमल्सेना संसदीय अभ्यासमा नयाँ हुन् । राष्ट्रिय सभामा कुल ५९ जनामध्ये ५६ जनाले मात्र भोट हाल्न पाउँछन् । एमालेबाट २७, कांग्रेस १३, माओवादी १२, फोरम दुई र राजपा दुई सदस्य रहेका छन्।